Mafekitori - Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Factory Magetsi Management
Inokodzera zvemagetsi, mota, simbi, michina, chikafu, mushonga nezvimwe.
Maitiro echinyakare emanyorero ekuyera mashandisirwo emagetsi emhando dzakasiyana dzemafekitori anoguma asina kukwana, isina kukwana uye isina kukwana data datha rekushandisa, izvo zvinoita kuti zvisakwanise kuongorora uye kuongorora mashandisirwo emagetsi, zvichikonzera kutadza kukwana kwekushandisa kwemagetsi uye mimwe michina mishina. zvinoreva kudzora mashandisirwo emagetsi, saka pane dzakasiyana-siyana tsvina yemagetsi. Iyo fekitori inogadzira magetsi yekutarisa sisitimu sosi inogona kuendesa waya uye kuendesa dhata rekushandisa magetsi emidziyo yakasiyana-siyana mufekitori mune chaiyo nguva, iri nyore kune mamaneja kuona nekuongorora mashandisirwo emagetsi efekitori yese chero nguva, kuitira kuti isimbise iyo fekitori yekushandisa magetsi, kuderedza mashandisiro emagetsi uye kuburitsa zvakanaka-kuchengetedza masimba.
Industrial kugadzirwa magetsi ekugadzirisa mhinduro inosanganisa yakangwara masuo, chiyero chakangwara uye masimba ekugadzirisa, akangwara data anotendeuka, masimba ekutarisa masimba uye zvimwe maindasitiri ezvekutengesa zvigadzirwa. Pakati pavo, iyo yakawanda-inoshanda magetsi emamita anotarisira kuunganidza mashandisirwo emagetsi ekushandisa uye simba mhando dhata yemagetsi akasiyana-siyana ekushandisa magetsi munharaunda imwe neimwe yezvirimwa, uye kuendesa ese data rekushandisa simba muiri chirimwa kune smart energy management system kuburikidza muchina wekutarisanudza muchina, kuitira kuti vaone zvakamirira simba rekushandisa simba Uye kuongorora, kubatsira vashandisi kuwana simba-rekuchengetedza nzvimbo, kupa simba rekushandisa simba data kune vashandisi kuumba matanho ekuponesa simba nezvirongwa, uye pakupedzisira vazadzise chinangwa chekuvandudza simba rose kubata zvakanaka uye chiyero chekushandiswa kwenzvimbo yekudyara.
Kubudirira kwesimba reiyo simba rekutonga system kune fekitori
Mushure mekusvitsa maindasitiri emagetsi ekugadzirisa masimba, vatengi vanogona kuziva izvi zvinotevera mabhenefiti.
7 * 24-awa-chaiwo ekuona-nguva yekutarisa: Iyo yesimba management platform inotsigira webhu bhurawuza, uye vashandisi vanogona kuziva chaiyo-nguva yekutarisa mamiriro ekushanda uye mamiriro ekushandiswa kwesimba kwemidziyo yakasiyana siyana munharaunda yezvirimwa kuburikidza nemidziyo smart, uye ine chaiyo-nguva alarm basa kubata kubata zvisizvo simba rekushandisa.
Kuona kwemagetsi: vatengi vanogona kuwana kunzwisisa kwakawanda kwekushandiswa kwemadhipatimendi akasiyana siyana uye akasiyana-siyana mashandisirwo emagetsi enhau kuburikidza nesimba kanban yemageji system. Vatengi vanogona kudzidza nezve chinzvimbo mamiriro zvakadzama kuburikidza newebhu webhusaiti, kubata simba ruzivo chero nguva uye chero kupi, uye kushandisa simba Kushandisa zvisina kufanira kuongorora kwemidziyo kushandiswa kwesimba, kufanotaura kutadza kunogona kwemidziyo, kuderedza michina kutadza kuyerwa.
Gadzira chirongwa chesainzi chesimba rekuchengetedza simba: Mamaneja ezvishandiso anogona kugadzirisa matambudziko akadai sekukanganisa-kunonoka uye isina kukodzera data mumamita ekuverenga vanhu kuburikidza neane smart system management system, ongorora simba rekushandisa data rezvikamu zvakasiyana uye zvishandiso nenguva, uye kutonga simba rakakura. kushandiswa uye mutengo wesimba. Gadzira masimba ezve simba uye nekuvandudza manejimendi simba.
Gadzira zvinoshanda zvine simba mashandisirwo ezviratidzo: Kuburikidza nesimba performance chiratidzo kuratidza uye kuongorora, uye wozomira maitiro esimba maitiro yakagadzirirwa kuzadzisa zvinangwa zvekuchengetedza simba.
Tora mutengo wemagetsi uye gadzirisa mashandiro esimba: iyo hurongwa hwakakwana hwekushandiswa kwesimba rinogona kubvunza nhoroondo dzepamhepo online, uye iine huwandu hwesimba masimba uye zvekuongororesa matanho ekuona zvishwe zvine mashoma simba chinhu uye kuita simba chinhu kuvandudza matanho; simba kushandisa Peak inoda alarm
Factory Magetsi Management inokodzera zvemagetsi, mota, simbi, michina, chikafu, mushonga etc.